Dalalka Caalamu Islaam Oo Berri U Dabaaldagaya Ciida Al-Fitriga. – Heemaal News Network
Guud ahaan Ummadda Islaamka oo ku kala sugan dalalka caalamka ayaa bilaabay dabaaldegga bilashada bisha Shawal kadib markii ay 29 maalmood ay soo soonaayeen.
Dalka Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka laga ciidayo maalinta berri ah oo ah maalin Jimce ah.
Dawlada Fadaraalka Oo Ka Hor Timid Musharaxnimada Madaxtinimada Mukhtaar Roobow Abu Mansuur
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si cad uga hor-timid musharaxnimada Mukhtaar Roobow Abu Mansuur, oo shalay isku soo taagey xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, oo lagu tartamayo bisha November ee soo socota. Wasaaradda Amniga Xukuumadda […]